Ma Dhabbaa In Madaxweyne Muuse Biixi Ku Khasbay Xubnaha Golihiisa Xukuumadda In Mid Waliba Reerkiisa Ka Keeno Musharrax U Taagan Wakiiladda Iyo Deegaanka
Ma Dhabbaa In Madaxweyne Muuse Biixi Ku Khasbay Xubnaha Golihiisa Xukuumadda In Mid Waliba Reerkiisa Ka Keeno Musharrax U Taagan Wakiiladda Iyo Deegaanka?!
Hargeysa, February 1, 2021- (TNN): – Warar lagu kalsoon yahay oo soo gaadhay Waregyska Foore ayaa da aha ka fayday arin cajiib ah oo ku Cusub Saaxadda hogaaminta Somaliland taasi oo ku saabsan in Madaxwey ne Biixi Khasab kaga dhigay inay Golihiisa Xukuumadda gaar ahaan Golaha Wasiiraddu inay Musharaxiin ka ke enaan deegaanada ay kasoo jeedaan gaar ahaan Golayaasha Wakiiladda iyo Deegaanka.
Wararkan ayaa sheegaya inuu arintan shuruud uga dhigay in Wasiirka talaabadaasi qaadi waaya ay macno ahaan noqonayso inaanu kalsooni ka haysan Beesha uu kasoo jeedo islamarkaana uu xilkiisu cidhiidhi gali ka ro, waxaanay taasi keentay in maalmihii u dambeeyay shaashadaha ama Warbaahinta lagu arko Wasiiro Xu kuumadda ka tirsan oo daadahaynaya Xubno Musharaxiinta ah oo lamaano ah oo ukala sharaxan Goleyaasha Deegaanka iyo Wakiiladda kuwaasi oo iska diwaangaliyay Xisbi Xaakimka Kulmiye.
Arintan ayaa la sheegayaa inay Ku kaliftay Madaxweyne Biixi kadib markii uu ogaaday inay haldoorkii ugu m iisaanka Cuslaan Beelaha ama Deegaamaddii uu cududda ku lahaa Kulmiye inay iska xaadiriyeen oo ay Musha raxiintoodii geeyeen Xisbiyadda Mucaaridka ah ee WADDANI iyo UCID. Xisbiga Kulmiye ayaad moodaa inuu lu miyay kalsoonidii Umaddii uu taageeradda ugu badan ku lahaa islamarkaana uu u muuqaal iyo sansaan egyah ay oo ay ka muuqdaan calaamadihii saaaxadda ka saaray Xisbigii Weynaa ee UDUB. Waxa si weyn isha loogu hayaa doorka uu ku yeelan doono Doorshadan Fooda inagu hayso iyadoo ay dad badani aaminsan yihiin in la ga awood badnaan doon marka loo eego miisaan Xubna uu doorkan Xushay oo aad looga awooda badan ya hay.
Dhinaca kale waxa wali saaxadda ka maqan oo aan Xisbiga Kulmiye iska soo dhex sharaxin Beesha Bariga Bur co oo ka mid ah aasaaskii iyo bud-dhigii Xisbiga Kulmiye islamarkaana aanu la’aantood Xisbiga Kulmiye sii jiri Karin. Warar hoose oo Wargeyska Foore helayo ayaa sheegaya in waxgaradka Deegaamadaasi ay wadatashi iskugu maqan yihiin islamarkaana wax walba laga filan karo.